ဆောင်းပါးကြည့်ရှုရန်မြို့၊ စီရင်စုသို့မဟုတ်ဒေသတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ မြေပုံပေါ်တွင် နှိပ်၍ မရပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးသင်ကြည့်လိုသောမြို့၊ စီရင်စုသို့မဟုတ်ဒေသကိုရွေးချယ်ပါ။
Aomori ကီ Iwate
Yamagata မီယာဂီ ဖူကူရှီးမား
Saitama Chiba တိုကျို
နီဂါတာ Toyama Ishikawa
ကျိုတို Shiga အိုဆာကာ
Hyogo နရာ Wakayama
Tokushima ကာဂါဝါ Ehime
Kumamoto Oita မီယာဇာကီ
ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း
ကျိုတိုတွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်များမှာ Fushimi Inari ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ Kinkakuji ဘုရားကျောင်းနှင့် Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းသည်ကျိုတိုမြို့အရှေ့ဘက်ရှိတောင်စောင်းများပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး ၁၈ မီတာမြင့်သောအဓိကခန်းမမှမြင်ကွင်းသည်အံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်သည်။ Kiyomizudera ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့သွားရအောင်။ ကျိုတိုရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းရှိ Kyoto ရှိ Kyoto = Shutterstock Kyoto ရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း၏ပုံ = Shutterstock Kiyoto ရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း = Shutterstock Kiyomizudera ကျိုတိုရှိ Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဗိမာန်တော်ကျိုတို = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း Kyoto = Shutterstock in Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းရှိ Kyoto = Shutterstock Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း၏မြေပုံငါအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရှုခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Kyoto"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Nanzenji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ရှိ Rurikoin ဘုရားကျောင်း၏ပုံရိပ်များ - တိုတိုကုဂျီဘုရားကျောင်းရှိဆောင်း ဦး ရာသီအရောင်များ, ကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ဒိုင်တိုကူဂျီဘုရားကျောင်း - သဘာဝတရားနှင့်သဘာဝတရားနှင့်သဟဇာတရှိဇင်ကမ္ဘာ။ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ - Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji စသည်တို့။ ဓာတ်ပုံများ - Eikando Zenrin-ji ဘုရားကျောင်း - အလှဆုံးဆောင်း ဦး ရာသီအရောင်များရှိသောဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - Kyoto Imoshial Palace (Kyoto Gosho) ဓါတ်ပုံများ - နွေရာသီတွင်ရိုးရာကျိုတိုရိုးရာဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ချယ်ရီပန်းပွင့်များ ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kamogawa မြစ်ဓါတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ဆောင်း ဦး ရာသီ
ဓါတ်ပုံများ - ဂျပန်ရှိနှင်းဖုံးနေသောရွာများ
ဂျပန်နှင်းဖုံးရွာတွေရဲ့ရှုခင်းကိုမင်းနဲ့မျှဝေချင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကား Shirakawa-go, Gokayama, Miyama နှင့် Ouchi-juku ၏ရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။ တစ်နေ့နေ့မှာ၊ ဒီရွာတွေမှာသန့်ရှင်းတဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုသင်ပျော်မွေ့လိမ့်မယ်။ ဆီးနှင်းဖုံးလွှမ်းနေသောကျေးရွာများ၏ပုံများ Shirakawago (Gifu စီရင်စု) Shirakawago, Gifu စီရင်စု Shirakawago, Gifu စီရင်စု Shirakawago, Gifu စီရင်စု၏ Girayama Girayama (Toyama Prefecture) Gokayama, Toyama Prefecture Gokayama, Toyama Prefecture Mioko Miyama, Kyoto စီရင်စုစီရင်စု၏ Miyama Ouchi-juku (ဖူကူရှီးမားစီရင်စု) Ouchi-juku, Fukushima စီရင်စု Ouchi-juku, ဖူကူရှီးမားစီရင်စု Ouchi-juku ၏မြေပုံနှင်းတောရွာများသို့သွားသည့်အခါအဘယ်သို့ဝတ်ရမည်ကိုငါအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရသည်။ နောက်ကျော "Snow Destinations" Related posts: Photos: Mt. ဂျပန်နိုင်ငံရှိဆီးနှင်းအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၂ ခု - Shirakawago, Jigokudani, Niseko, Sapporo ဆီးနှင်းပွဲတော်။ ။ ဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်ရှိ K-cars ဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်နိုင်ငံရှိ Sakura- ချယ်ရီပန်းပွင့်များဓာတ်ပုံများ - Miharu Takizakura - ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးချယ်ရီပင် ! ဓာတ်ပုံများ - San'in -A လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမြေယာဟောင်းခေတ်ဂျပန်ဖြစ်နေဆဲ! ဓါတ်ပုံများ - Nara ဂျပန်ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဂျပန်ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ လှပသောဓာတ်ပုံ ၆၀ ကိုခံစားကြည့်ပါ။ ဓာတ်ပုံများ - တိုကျိုပင်လယ်ကွေ့ရှိ Odiniba ဓာတ်ပုံများ - ရာသီဥတုလေးရာသီဓါတ်ပုံများ - မီဒိုစီရင်စုရှိ Hakodate ဓါတ်ပုံများ - Ise Jingu ဘုန်းကြီးကျောင်း
ဓာတ်ပုံများ - နွေရာသီတွင် Biei နှင့် Furano
နွေရာသီတွင်ဟော့ကိုင်းဒိုတွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားများမှာ Biei နှင့် Furano ဖြစ်သည်။ ဤဒေသများသည်ဟော့ကိုင်းဒိုးအလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီးကြမ်းတမ်းသောလွင်ပြင်များရှိသည်။ ရောင်စုံပန်းများပွင့်။ ဤလွင်ပြင်ပေါ်ရှိသဘာဝပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့မြင်ခြင်းကသင်၏စိတ်ကိုကုသပေးလိမ့်မည်။ Biei နှင့် Furano တို့ကိုငါဆောင်းပါးအချို့ရေးထားပြီးပြီ။ သို့သော်နွေရာသီမြက်ခင်း၏ဂုဏ်အသရေကိုထပ်မံမိတ်ဆက်ချင်ပါတယ်၊ ကျေးဇူးပြု၍ Biei နှင့် Furano အကြောင်းဆောင်းပါးများကိုဖတ်ရှုပါ။ နွေရာသီတွင်လှပသောကမ္ဘာမြေ Biei မှ Hokkaido, Sunrise = Adobestock လှပသောပန်းများသည် Biei၊ Hokkaido ရှိရောင်စုံတောင်ကုန်း၊ ဂျပန် = Shutterstock African Marigold, Salvia သည်ကျော်ကြားပြီးလှပသောမြင်ကွင်းကျယ်ပန်းဥယျာဉ်ရှိ Shikisai-no-oka ရှိ Hokkaido ရှိသက်တံ့ရောင်များ , Japan = Shutterstock Lavendar, Sunrise Park, Furano, Hokkaido၊ နီမောင်းသောအပွင့်ပွင့်၊ ဂျပန် = Shutterstock အမျိုးသမီး Tomita Farm၊ Furano၊ Hokkaido ရှိ Lavender နယ်မြေတွင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး Biei နှင့် Furano ရှိလှပသောအခြားအမြင်များ Biei ၏လှပသောတောင်ကုန်း cho, Hokkaido = Adobe Stock Ken & Mary သစ်ပင်၊ Biei-cho တွင်ထင်ရှားကျော်ကြားသောနေရာ၊ Hokkaido Japan = Shutterstock နေကြာပွင့်သည် Hokusei no Oka Tenbo ဥယျာဉ်၊ Hokkaido ရှိဂျပန်၊ bieishirogane မြို့ရှိ Shutterstock အပြာရောင်ကန် = bieishirogane မြို့ရှိ Shutterstock အပြာရောင်ကန် = Hokkaido ညနေခင်း၌ AdobeStock ညနေခင်း။ Biei Hokkaido, Japan = Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock နေဝင်ချိန် Biei, Hokkaido, Japan = Shutterstock Maps Biei Furano နိဂုံးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Hokkaido"...
ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Gion ရှိ Geisha (Maiko & Geigi)
ဂျပန်၌ "geisha" ယဉ်ကျေးမှုရှိသည်။ Geisha သည် guests ည့်သည်များအားဂျပန်အကများနှင့်သီချင်းများဖြင့်စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ဖျော်ဖြေသောအမျိုးသမီးများဖြစ်သည်။ Geisha သည် Edo ကာလအတွင်းတည်ရှိခဲ့သော courtesan "Oiran" နှင့်လုံးဝခြားနားသည်။ ကျိုတိုတွင် geisha ကို geigi ဟုခေါ်သည်။ ငယ်ရွယ်သော geisha အလုပ်သင်ကို maiko ဟုခေါ်သည်။ မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သောအမျိုးသမီးများသည်ဂေဟာလ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။ အရင်တုန်းကငါ geisha ကိုအကြိမ်ကြိမ်အင်တာဗျူးခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့သည်အလွန်ဥာဏ်ရည်ရှိပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောအမူအကျင့်များကိုသင်ယူခဲ့ကြပြီးရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၏အစဉ်အဆက်ဆက်ခံသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျိုတိုတွင်၊ နွေ ဦး ရာသီနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီများ၌သင်ဂေရှိအကကိုကြည့်ရှုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Geisha သည်ဇူလိုင်လတွင် Gion ပွဲတော်၌တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး geisha ယဉ်ကျေးမှုကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။ Gion ၏ဓာတ်ပုံ Gion = Shutterstock ၏ဓာတ်ပုံ Gion = Shutterstock ၏ Gion = Shutterstock ၏ဓာတ်ပုံ Gion = Shutterstock ၏ Gion = Shutterstock ၏ဓာတ်ပုံ Gion = Shutterstock ၏ဓာတ်ပုံ Gion = Shutterstock ၏ဓာတ်ပုံ Gion = Shutterstock ၏ Gion = Shutterstock ၏မြေပုံမြေပုံ Gion မင်းကိုအဆုံးထိဖတ်ဖို့ငါသဘောကျတယ်။ နောက်သို့ "Best of Kyoto"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ: ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတို Imperial နန်းတော် (ကျိုတိုဂိုရှို) ဓာတ်ပုံများ: နွေရာသီတွင်ရိုးရာကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ချယ်ရီပန်းများပွင့်နေသည့်ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kiyomizudera ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kamogawa မြစ်များဓာတ်ပုံများ - ဓာတ်ပုံများ။ ကျိုတိုရှိ Nanzenji ဘုရားကျောင်း : ကျိုတိုတွင် Jidai Matsuri ပွဲတော်ဓါတ်ပုံများ။ ။ Arashiyama ရှိ“ Hanatouro” ၏ထူးခြားသောအလင်းရောင်၊ Kyoto ဓာတ်ပုံများ - ဆောင်းရာသီတွင် Kifune, Kurama, Ohara - မြောက်ပိုင်းကျိုတိုဓာတ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်း - Daitokuji Temple ...
ဓါတ်ပုံများ - Kinkakuji vs Ginkakuji - ဘယ်သူ့အကြိုက်ဆုံးလဲ။
ဘယ်ဟာကိုပိုကြိုက်သလဲ Kinkakuji or Ginkakuji? ဒီစာမျက်နှာကိုကြည့်ရင်ကျိုတိုကိုကိုယ်စားပြုတဲ့ဒီဘုရားကျောင်းနှစ်ခုရဲ့လှပတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ Kinkakuji နှင့် Ginkakuji အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကအောက်ပါဆောင်းပါးများကိုဖတ်ပါ။ ကျိုတိုရှိ Kinkakuji နှင့် Ginkakuji Ginkakuji ဘုရားကျောင်း၊ ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = ကျိုတိုတို Ginkakuji ရှိ Shutterstock Japan = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ Shutterstock Ginkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = ကျိုတိုရှိ AdobeStock Kinkakuji ဘုရားကျောင်း, ဂျပန် = Ginkakuji ၏ Shutterstock မြေပုံ Ginkakuji မြေပုံ Ginkakuji ၏မြေပုံ နောက်သို့ "Best of Kyoto"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်းဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိသမိုင်းဝင်တောင်ကုန်းလမ်းများ - စနိုင်း - ဇကာ၊ နိနီ - ဇကာစ။ ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင် Jidai Matsuri ပွဲတော်။ ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုတွင်ချယ်ရီပန်းများပွင့်များဓာတ်ပုံများ: ကျိုတို Imperial နန်းတော် (ကျိုတို) Gosho) ဓာတ်ပုံများ - ဆောင်းရာသီတွင် Kifune, Kurama, Ohara - ကျိုတိုကျိုကျိုတိုမြောက်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ခြင်း။ အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများ - Fushimi Inari, Kiyomizudera, Kinkakuji စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံများ: Nara - ဂျပန်၏မြို့တော်၏ရှေးဟောင်းဓာတ်ပုံများ - Geion (Maiko & Geigi) Gion, ကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - နွေရာသီတွင်ရိုးရာကျိုတိုဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်ရှိနှင်းဖုံးနေသောရွာများဓာတ်ပုံများ - Koyasan
ဓါတ်ပုံများ - Hakodate
ဟော့ကိုင်းဒိုးတောင်ပိုင်းရှိ Hakodate သည်ဇန်နဝါရီမှမတ်လအထိနှင်းဖုံးလွှမ်းနေသည်။ ယခုအချိန်တွင် Hakodate သည်အလွန်လှပသည်။ Asaichi ဟုခေါ်သောစျေးကွက်ရှိပင်လယ်စာဆန်စပါးသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ရဲ့ Hakodate ကို virtual သွားကြည့်ရအောင်။ အသေးစိတ်အတွက်နောက်ဆောင်းပါးကိုကိုးကားပါ။ တောင်ကုန်းမှ Hakodate Night view ၏ဓါတ်ပုံများ Hakodate = Hakodate = Shutterstock တောင်မှဆောင်းရာသီရှုခင်း Hakodate ဆိပ်ကမ်း = Shutterstock မှတွေ့သော Hakodate Hakodate မြို့ရှိ Motomachi = Shutterstock City tram ပြေးသော Hakodate မြို့ = ဆောင်းရာသီတွင် Hakodate မြို့ Shutterstock Hakodate ရှိ Hakemate ဘူတာပင်လယ်ရေကန်ကန် Hakodate ရှိ Kanemori Aka Renga Soko = Shutterstock Hokodate နံနက်စျေး။ နံနက်စျေး = Shutterstock လှပသောအလင်းရောင် Goryokaku = Shutterstock လှလှပပလှပသော Goryokaku = Shutterstock Hakodate ၏ဆင်ခြေဖုံးများရှိလှပသော Komagatake တောင်တန်း = Shutterstock = သင် ski နှင်းလျှောစီးခြင်းနှင့်နှင်းလျောစီးခြင်း Hak Hakodate ၏ဆင်ခြေဖုံးရှိ Shunterstock Map Shutterstock ၏မြေပုံ အဆုံးထိ။ နောက်သို့ "Best of Hakodate" သို့ပြန်သွားရန် Related posts: Hakodate! ၇ အကောင်းဆုံးခရီးသွား At ည့်ဆွဲဆောင်များနှင့်ဓာတ်ပုံများ။ နွေရာသီတွင် Biei နှင့် Furano ဓာတ်ပုံများ - ဟော့ကိုင်းဒိုရှိ Taushubetsu တံတားဓာတ်ပုံများ - ဟော့ကိုင်းဒိုမှ Tomamu ဓာတ်ပုံများ - ဟော့ကိုင်းဒိုရှိမြင်းများဓာတ်ပုံများ - တိုကျိုရှိလှပသောသစ်တောများ၊ : Yokohama Photos: Koyasan Photos: Japan ရှိနှင်းဖုံးနေသောကျေးရွာများ။ ။ ဓာတ်ပုံ - အိုကီနာဝါ၏လှပသောပင်လယ်ရေ ၁ - ထာဝရအဆုံးမဲ့ကြည်လင်သောရေကိုခံစားကြည့်ပါ။ ဓာတ်ပုံ - ညဘက်မြင်ကွင်း ...
ဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Tadami လိုင်း
သင်ရထားမှလှပသောဂျပန်ကျေးလက်ဒေသရှုခင်းများကိုခံစားလိုပါကဖူကူရှီးမားအနောက်ပိုင်းရှိ JR Tadami လိုင်းကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။ တာဒီမီလိုင်းသည် Aizu-Wakamatsu ဟုခေါ်သည့်ရှေးဟောင်းမြို့တော်မှတောင်ကို ဖြတ်၍ ဂျပန်၏ဆာမူရိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Tadami လိုင်း JR Tadami လိုင်း = Shutterstock JR Fukushima စီရင်စုရှိ Tadami လိုင်း = Shutterstock JR Fukushima စီရင်စုရှိ Tadami လိုင်း = Shutterstock JR Fukushima စီရင်စုရှိ Tadami လိုင်း = Shutterstock JR Fukushima စီရင်စုရှိ Shadterstock JR Fukushima စီရင်စုရှိ Shutterstock JR Tadami လိုင်း = ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Pixta JR Tadami လိုင်း = ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Shutterstock JR Tadami လိုင်း = ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Pixta JR တာဒီလိုင်း = နိဂုံးကိုဖတ်ရှုခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုငါကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နောက်သို့ "Best of Fukushima"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Ouchijuku ကျေးရွာဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Hanamiyama ဥယျာဉ်ဖူကူရှီးမားစီရင်စု၏အကောင်းဆုံးဆွဲဆောင်မှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ - Miharu Takizakura - ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးချယ်ရီပင်။ ဓာတ်ပုံများ - Mie စီရင်စုရှိ Ise Jingu ဘုန်းကြီးကျောင်းများဓာတ်ပုံများ: Ishikawa စီရင်စုရှိ Kanazawa ဓာတ်ပုံများ - Yamaguchi စီရင်စုရှိ Motonosumi ဘုန်းတော်ကြီးဓါတ်ပုံများ - Nagasaki စီရင်စုရှိ Gunkanjima ကျွန်းဓါတ်ပုံများ - Nagano စီရင်စုရှိ Togakushi ဘုန်းကြီးကျောင်းဓာတ်ပုံများ - Shiga စီရင်စုရှိ Biwako ချိုင့်ဓာတ်ပုံများ - Miyagaki စီရင်စုရှိ Takachiho ဓာတ်ပုံများ - ဂျပန်နိုင်ငံရှိနှင်းဖုံးနေသောရွာများ
ဓာတ်ပုံများ - Beppu (၁) လှပတောက်ပသောရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်း
Bushpu သည် Kyushu ၏အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင်တည်ရှိပြီးဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ သင် Beppu သို့ရောက်သောအခါဤတွင်နှင့်ဤနေရာတွင်ပေါ်ပေါက်လာသည့်ရေပူစမ်းများ၌သင်ပထမ ဦး ဆုံးအံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ တောင်ကုန်းရှိ Beppu ၏မြို့ပြရှုခင်းကိုကြည့်ကြည့်ပါ၊ ဤစာမျက်နှာတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းနေရာတိုင်း၌ရေနွေးငွေ့မြင့်တက်နေသည်။ သူတို့ကမီးမဟုတ်ပါ။ ညအချိန်တွင်ဤရေနွေးငွေ့များသည်လှပပြီးတောက်ပနေသည်။ Beppu ၏ဓာတ်ပုံများ Beppu ၏မြေပုံငါအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်ရှုခြင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခြားဓါတ်ပုံများကိုကြည့်ပါ။ Back of "Best of Beppu" ကျွန်ုပ်၏အကြောင်း Bon KUROSAWA ကျွန်ုပ်သည် Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်လွတ်လပ်သော ၀ က်ဘ်စာရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ NIKKEI မှာဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယ်ဒီတာချုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ။ ငါ့ကိုဂျပန်နှင့်ပတ်သက်သောပျော်စရာနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာအရာများစွာမိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ အသေးစိတ်အတွက်ဤဆောင်းပါးကိုကိုးကားပါ။ ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - Beppu (၄) အမျိုးမျိုးသောစတိုင်များဖြင့်ရေပူစမ်းကိုခံစားကြည့်ပါ။ Beppu! ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးရေပူစမ်းအပန်းဖြေစခန်း၌ပျော်မွေ့ပါစေ။ ဓာတ်ပုံများ: Beppu (4) အမျိုးမျိုးသော Hells သို့သွားကြပါစို့ (Jigoku） ဓါတ်ပုံများ: Beppu (၂) ရာသီလေးရာသီ၏လှပသောအပြောင်းအလဲများ - Noboribetsu Onsen -Hokkaido ၏အကြီးဆုံးနွေ ဦး အပန်းဖြေစခန်း Shining Spring နှင့် Distant Snow Scene: လှပသောဓာတ်ပုံ ၁၀ ခုမှဓာတ်ပုံများ) : Hakone - တိုကျိုမြို့အနီးရှိနွေ ဦး ရာသီPhotosရိယာဓာတ်ပုံများ - ဟော့ကိုင်းဒိုရှိ Niseko နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်း၌ဆောင်းရာသီ - နှင်းမှုန့်များခံစားပါ။ ဓါတ်ပုံများ - Kinosaki Onsen - Hyogo စီရင်စုရှိရိုးရာရေပူစမ်းမြို့တော် - ဓာတ်ပုံများ: Ginzan Onsen -A retro hot spring ...
ဓာတ်ပုံများ - Miharu Takizakura - ဂျပန်နိုင်ငံ၏အကောင်းဆုံးချယ်ရီပင်!
မင်းကိုဂျပန်မှာအလှဆုံးချယ်ရီပန်းပွင့်လို့ငါမေးရင်ငါ Fukushima စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura ပြောလိမ့်မယ်။ Miharu Takizakura သစ်ပင်ကနှစ် ၁၀၀၀ ကျော်ပြီ။ ဤလှပသောချယ်ရီပင်သည်ဒေသခံများအားကြာမြင့်စွာကတည်းကကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ Miharu Takizakura ကိုကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ရန် virtual ခရီးကိုသွားကြစို့။ Fukushima စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura ၏ပုံများ Fukushima စီရင်စုရှိ Shutterstock ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = Shutterstock Fukushima пре Fure စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = Shutterstock Fukushima ရှိ Shutterstock တရားဟောရာ Fukushima ရှိ Shutterstock Fuka Prefecture = Shutterstock Fukushima ရှိ Miharu Takizakura Prefecture = Shutterstock Fukushima ရှိ Miharu Takizakura Prefecture = Shutterstock Fukushima ရှိ Miharu Takizakura Prefecture = Shutterstock Fukushima စီရင်စုရှိ Miharu Takizakura = သင်ဟာ Miharu မှ Fukushima Prefecture = Shutterstock Miharu Takizakura Fukushima စီရင်စုရှိ Shutteriz ဖတ်ရန်။ နောက်သို့ "Best of Fukushima"ဆက်စပ်ရေးသားချက်များ - ဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Hanamiyama Park ။ ဓာတ်ပုံများ - ၁၁။ ဂျပန်ချယ်ရီပန်းများကိုအပြည့်အ ၀ ခံစားနိုင်ရန်သော့ချက်များ။ ။ ဓာတ်ပုံ။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိနှင်းဖုံးနေသောကျေးရွာများ။ ။ ဓာတ်ပုံ - တောင်ကိုရီးယားယိုရှီနို -၃၀,၀၀၀ နွေ ဦး ပေါက်ပွင့်သည်။ ဓာတ်ပုံများ: Koyasan ဓာတ်ပုံများ: Ise Jingu ဘုန်းကြီးကျောင်း Mie Prefecture ဓါတ်ပုံများ - Ishikawa စီရင်စုရှိ Kanazawa ဓာတ်ပုံများ - San'in -A ခေတ်ဟောင်းဂျပန်တည်ရှိသည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမြေပုံများ - ဓာတ်ပုံများ - Shiga စီရင်စုရှိ Biwako ချိုင့်ဓာတ်ပုံများ - Shogawa Gorge ခရုဇ် - ဖြူစင်သန့်ရှင်းသောကမ္ဘာရှိမြစ်ချောင်းများ။ ဓာတ်ပုံများ: Kashima- Ibaraki စီရင်စုရှိ jingu ဘုန်းကြီးကျောင်းဓာတ်ပုံများ: Sakura- ချယ်ရီပန်းပွင့် ...
ဓာတ်ပုံများ - Miyagaki စီရင်စုရှိ Takachiho
Takachiho သည်ဂျပန်ဒဏ္ologyာရီ၏အိမ်ဟုလူသိများသည့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောပြည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Kyushu အရှေ့ပိုင်းရှိ Miyazaki စီရင်စု၏တောင်တန်းဒေသတွင်တည်ရှိသည်။ အဆိုပါမြို့နေဆဲဒဏ္myာရီအစက်အပြောက်နှင့်သူတို့နှင့်ဆက်စပ် Kagura ကခုန်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီ၌လှပသောတိမ်တိုက်များကြောင့်လည်းထင်ရှားသည်။ ဒီမြို့မှာလူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာကတော့ Takachiho Gorge ။ ဓာတ်ပုံများစွာနှင့် Takachiho သို့ virtual သွားကြည့်ကြစို့။ Miyagaki စီရင်စုရှိ Takachiho Takachiho ၏ဓါတ်ပုံများ = Shutterstock Takyiho ၏ Miyagaki Prefecture = ADobeStock Takachiho ၏ Miyagaki Prefecture ရှိ Takachiho ၏ Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho Miyagaki Prefecture = Shutterstock Takachiho Miyagaki Prefecture မီတာ - Mi Mi Takachiho ၏ Miyagaki စီရင်စုမြေပုံတွင်သင့်အဆုံးကိုသင်ဖတ်ရှုခြင်းအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Back to "Miyazaki ၏အကောင်းဆုံး" သို့ပြန်သွားရန်ဆက်နွယ်သောစာမူများ - ဓာတ်ပုံများ - ဂွန်မားစီရင်စုရှိ Oze ဓာတ်ပုံများ - Shiga စီရင်စုရှိ Biwako ချိုင့်ဓာတ်ပုံများ - Ishikawa စီရင်စုနယ်ရှိ Kanazawa ဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားရှိ Hanamiyama ဥယျာဉ်ဓာတ်ပုံများ - Prefecture ရှိ Ise Jingu Shrine ဓာတ်ပုံများ - Nagasaki ရှိ Gunkanjima ကျွန်းဓာတ်ပုံများ Prefecture Photos: Nagano စီရင်စုရှိ Togakushi Shrine ဓာတ်ပုံများ - Yamaguchi ရှိ Motonosumi Shrine Prefecture ဓါတ်ပုံများ - Fukushima စီရင်စုရှိ Tadami လိုင်းဓာတ်ပုံ - Okinawa စီရင်စုရှိ Shuri Castle - ဓာတ်ပုံ: Shimane စီရင်စုရှိ Matsue ဓါတ်ပုံများ - Shiga စီရင်စုရှိ Hikone Castle
“ လာလည်ပတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Best of Japan”! ကျွန်တော့်နာမည်က Bon Kurosawa ပါ။ ကျွန်တော်ရည်မှန်းချက်ကတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိတဲ့ visitors ည့်သည်များနှင့်ဂျပန်ကိုစိတ်ဝင်စားသူများကိုအသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးရန်။ ဤဆောင်းပါးများ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကသင့်အားထူးခြားသောအရသာကိုပေးလိမ့်မည်။ ငါမှတဆင့်မျှော်လင့်ပါတယ်Best of Japanမင်းကဂျပန်နဲ့ပိုနီးကပ်လာလိမ့်မယ်။
ဒီ site ပေါ်တွင်ဂျပန်ခံစားပါ!
ဒီ site ကိုကွန်ပျူတာမှအကောင်းဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အချို့ဗီဒီယိုများသည်သင်၏စမတ်ဖုန်းမှမဖွင့်နိုင်ပါ။ သို့သော်သင်၏စမတ်ဖုန်းမှဂျပန်နိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသောဆောင်းပါးများကိုသင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှပြင်ပလင့်များကိုလည်းသင့်အကျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ဂျပန်အကြောင်းလေ့လာချင်ရင် (သို့) စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တစ်ခုခုလိုအပ်ရင်။Best of Japan” သင်၏အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။
ဒီကနေဂျပန်ဘဝနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဂျပန်ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုနားလည်ရန်သော့ချက်မှာ "သဟဇာတ" ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤ site ရှိ "သဟဇာတ" ရှုထောင့်မှဂျပန်ဘ ၀ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြလိုပါသည်။ ဂျပန်ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအပေါ်အခြေခံသော "သဟဇာတ" ဂျပန်နှင့် ပတ်သက်၍ အဘယ်ပုံသဏ္haveာန်ရှိသနည်း။ အချို့လူများကဂျပန်သည်နားလည်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်သည်တစ်နည်းအားဖြင့် Galapagos ဖြစ်နိုင်သည်။ တိုက်ကြီးနှင့်ဝေးသောကျွန်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ထူးခြားသောလူနေမှုနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သည်။ ဂျပန်သို့ရောက်သောအခါလူများစွာသည် Galapagos ကဲ့သို့ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုအံ့အားသင့်ကြသည်။ တိုကျိုနှင့်အိုဆာကာကဲ့သို့သောမြို့ကြီးများသည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော်လည်းရာသီဥတုလေးမျိုး၏ကြွယ်ဝသောသဘာဝသည် visitors ည့်သည်များကိုကြိုဆိုသည်။ နတ်ကွန်း၊ ဆူမိုနှင့်ကူကီကဲ့သို့သောဓလေ့ထုံးစံများသည်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော်လည်းကာတွန်း၊ cosplay၊ စက်ရုပ်စသည့်ယဉ်ကျေးမှုအသစ်များသည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး မွေးဖွားလာကြသည်။ အားလုံးဆန့်ကျင်သောအရာတို့ကိုသင်္ကေတများမှာရှိရာတိုင်းပြည်။ ဒါဂျပန်ပါ အောက်ဖော်ပြပါပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါကသင်သည်ဂျပန်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောသဟဇာတဖြစ်မှုကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ ငါအမျိုးမျိုးသောစာမျက်နှာများကိုပြင်ဆင်ကြပါပြီ, ဒါကြောင့်စာမျက်နှာများအများကြီးသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပျော်စရာရှိသည်။ သဘာဝနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုလူများနှင့်အတူသဟဇာတရိုးရာခေတ်သစ်ခေတ်သစ်ဂျပန်ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကိုမိတ်ဆက်အကြံပြုသည့်ဗွီဒီယိုသည်အဆုံးတိုင်အောင်သင်ဖတ်ရှုရခြင်းကိုငါတန်ဖိုးထားသည်။ Back to Home ကျွန်ုပ်၏အကြောင်း Bon KUROSAWA ကျွန်ုပ်သည် Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်လွတ်လပ်သောဝဘ်စာရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ NIKKEI မှာကျမ
သင်ဂျပန်သို့သွားသည့်ခရီးတွင်သင်ပျော်မွေ့နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့အနက်မည်သည့်အရာများအတွက်သင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသနည်း။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်ဂျပန်၌သင်ပျော်မွေ့နိုင်သောအရာများကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်စိတ်ဝင်စားသောအရာ၏ပုံကိုကလစ် နှိပ်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်များရယူပါ။ ကီမိုနို ၀ တ်ဆင်ထားသောနိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလက်မှတ်များနှင့်လက်မှတ်များကြိုတင်မှာယူသည့်ဂျပန်နိုင်ငံ၏ရိုးရာဝတ်စုံသည်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုရှိကျော်ကြားသောဗိမ္မာန်တော်သို့ဆန်ဆိုဂျီဘုရားကျောင်းသို့လမ်းလျှောက်နေစဉ်အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ shutterstock ခရီး ဒါကအမျိုးမျိုးသောလက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်များကိုဘွတ်ကင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤအချက်ကိုနောက်ဆောင်းပါးတွင်မိတ်ဆက်ပေးသည်၊ ထို့ကြောင့်သင်စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဖြည့်ပါ။ ၂၀ ဂျပန်သို့သွားစဉ်သင်ရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာများ၊ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသောအရာ ၂၀ ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုသင်နှိပ်လျှင်သက်ဆိုင်ရာဆောင်းပါးသို့ပြောင်းနိုင်သည်။ ဂျပန်အစားအစာများဆီးနှင်းနေရာများချယ်ရီပန်းပွင့်များဝယ်ခြင်းဂျပန်မိန်းကလေးငယ်နှစ် ဦး သည်ကျိုတို၊ အင်တိုဂျီဘုရားကျောင်းရှိဆောင်းဥယျာဉ်သောသစ်ရွက်ဂျပန်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရှု။ ပျော်မွေ့ရန်ကော်ဇောနီတွင်ထိုင်ကြသည်။ ဤတွင် Rinzai ဇင်ဂိုဏ်းဖြစ်သည်။ ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်ထင်ရှားသည်။ ဆောင်းဥယျာဉ်အရွက်များဂျပန်ဥယျာဉ် Onsen (နွေ ဦး ရာသီ) တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ငါးဖမ်းခြင်း Hiking Cosplayer ကိုဂျပန် cosplay ပွဲတော်တွင်ဇာတ်ကောင်များအဖြစ်ပြသသည်။ ကစားသမားများသည်ယဉ်ကျေးမှုတစ်မျိုးမျိုးကိုဖန်တီးရန်ရံဖန်ရံခါအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကြသည်။ cosplay ", အိုဆာကာ, ဂျပန် = shutterstock အပန်းဖြေပန်းခြံများနှင့် Theme ဥယျာဉ်ပွဲတော်များ ...
ဒီဆိုဒ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျပန်နေရာအနှံ့အပြားတွင်မိတ်ဆက်ရန်စာမျက်နှာများရှိသည်။ သင်စိတ်ဝင်စားသောခေါင်းစဉ်များကိုမီနူးကြည့်ခြင်းဖြင့်နှိပ်ခြင်းဖြင့်စာမျက်နှာများသို့သွားနိုင်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်ဤစာမျက်နှာများကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အောက်ပါတို့ကိုကြည့်ပါ။ သင်စိတ်ဝင်စားသောစာမျက်နှာတစ်ခုရှိပါက၎င်းကို နှိပ်၍ ထိုစာမျက်နှာသို့သွားပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂျပန်သည်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်ကျယ်ပြန့်သောတိုင်းပြည်ဖြစ်ပြီးမြောက်ဘက်တွင်ဟော့ကိုင်းဒိုး၊ တောင်ဘက်တွင်ကျူရှူးနှင့်အိုကီနာဝါကျွန်းတို့မှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဂျပန်ကိုကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်တွေ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ ၁၀ အကောင်းဆုံးခရီးစဉ်များ - ဘယ်ကိုသွားချင်ပါသလဲ။ အကယ်၍ ဂျပန်တွင်မည်သည့်ရှုခင်းများကြည့်ရှုနိုင်သောနေရာများကိုခြုံငုံကြည့်လိုပါကအောက်ပါစာမျက်နှာကိုဖတ်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားသောအခါအကောင်းဆုံးနေရာများဂျပန်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးနေရာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ဆလိုက်ပုံရိပ်များကိုကြည့်ပြီးသင်စိတ်ဝင်စားသည့်နေရာကိုနှိပ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါသည်ဒေသနှင့်သက်ဆိုင်သောဆောင်းပါးများဖြစ်သည်။ Hokkaido အကြံပြုသောနေရာများ Sapporo Hakodate Furano / Biei Tohoku ဒေသ (ဟွန်ရှူး၏အရှေ့မြောက်ပိုင်း) အကြံပြုထားသည့်နေရာများ Sendai (Miyagi Prefecture) Towada, Oirase (Aomori စီရင်စု) Aizuwakamatsu (Fukushima စီရင်စု) တိုတိုတို (တိုကျိုတိုကူကူကူ Hak ကူးကရာခရိုင်) (Kanagawa စီရင်စု) Chubu ဒေသ (အလယ်ပိုင်းဟွန်ရှူး) အကြံပြုထားသည့်နေရာများဖူဂျီတောင် (Yamanashi, Shizuoka စီရင်စု) Shirakawago (Gifu စီရင်စု) Kanazawa (Ishikawa စီရင်စု) Kansai ဒေသ (ကျိုတိုနှင့်အိုဆာကာတစ်ဝိုက်) အကြံပြုနေရာများကျိုတို (ကျိုတိုစီရင်စုနယ်) နာရာ ) အိုဆာကာ (အိုဆာကာစီရင်စု) Chugoku ဒေသ (အနောက်ဟွန်ရှူး) အကြံပြုလိုသည့်နေရာများဟီရိုရှီးမား (ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု) မိယာဂျီမာ (ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု) မတ်စူး (Shimane ... )
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်ရန် Booking လုပ်နည်း
ထူးဆန်းတဲ့ဝါသနာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ငါဟိုတယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေရာများနှိုင်းယှဉ်ရတာကြိုက်တယ်။ ငါဟိုတယ်တစ်ခုမှာဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့နေရာအတော်များများနဲ့စစ်ဆေးပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသော site နဲ့ဘွတ်ကင်လုပ်တယ်။ ဤဝါသနာပါသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်အတွက်အထူးအကြံပြုလိုသောကြိုတင်မှာကြားထားသည့်နေရာများကိုအသုံးပြုသောခရီးသွား are ည့်သည်များရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားရသည်။ ထို့ကြောင့်၊ လူတိုင်းအတွက်အကြံပြုသည့်ဟိုတယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေရာများအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ "Best of Japanယခု မှစ၍ ယခုစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်အကြံပြုလိုသည့်ဟိုတယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေရာအချို့ကိုမိတ်ဆက်ပါမည်။ ဂျပန်နိုင်ငံရှိဟိုတယ်၊ ရူကိုန်၊ မင်ဆူကုတို့ကဲ့သို့သောနေရာထိုင်ခင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိလိုပါကအောက်ပါဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ပုံတစ်ပုံချင်းစီကိုနှိပ်ပါ၊ သီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ပြသခဲ့သည်2ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ဘွတ်ကင်နေထိုင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှိုင်းယှဉ်ရာနေရာများဂျပန်မှာဟိုတယ်ဒါမှမဟုတ် Ryokan ဘွတ်ကင်လုပ်နိုင်တဲ့ဆိုဒ်များအများကြီးရှိတယ်။ အားလုံးကြည့်လို့မရနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်ငါပထမ ဦး ဆုံးအကြံပြုချင်တာက။ TripAdvisor TripAdvisor တိုကျိုသို့မဟုတ်ကျိုတိုကဲ့သို့သောအချို့သောမြို့များတွင်သင်နှင့်သင့်တော်သောနေရာထိုင်ခင်းကိုရှာဖွေလိုပါက TripAdvisor တွင်ပထမဆုံးစစ်ဆေးသင့်ကြောင်းအကြံပြုသည်။ အလွန်ကျော်ကြားသောနှိုင်းယှဉ်နိုင်သော site တစ်ခု။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အားသာချက်နှစ်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာ TripAdvisor ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သွားမည့်မြို့တွင်အဆင့်အမြင့်ဆုံးဟိုတယ်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းနိုင်သည်။ ဒုတိယအနေဖြင့်၊ odation အစီအစဉ် ...
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး! Japan Rail Pass, Shinkansen, လေဆိပ်များစသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားသောအခါ shinkansen (Bullet ရထား)၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီ၊ ကားငှားရမ်းခြင်းစသည်တို့ဖြင့်အလွန်ထိရောက်စွာရွေ့လျားနိုင်သည်။ သင်သည်သင်၏ Shinansen စီးနင်းမှုလမ်းကြောင်းသို့ Shinkansen စီးနင်းလိုက်ပါက၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်ကောင်းလိမ့်မည်။ ထိုကိစ္စတွင် "Japan Rail Pass" ကိုဝယ်ခြင်းသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ဒီစာမျက်နှာမှာသူတို့ကိုခြုံငုံသုံးသပ်နိူင်တယ်။ ဒီစာမျက်နှာကအတော်လေးရှည်တယ် အကယ်၍ သင်သည်တစ်ခုချင်းစီမှ“ show” ခလုတ်ကိုနှိပ်လျှင်အသေးစိတ်ဝှက်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးမာတိကာကိုသုံးပါ။ သင်ဤစာမျက်နှာ၏ညာဘက်အောက်ခြေရှိမြှားခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ထိပ်သို့ပြန်နိုင်သည်။ Japan Rail Pass "Japan Rail Pass" ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်။ ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်ရင်၎င်းသည်သီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ပုံကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်ဤမြေပုံကိုသီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုမှ Japan Rail Pass ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ About သင်သည် Shinkansen ကဲ့သို့ JR ရထားများကို အသုံးပြု၍ ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းခရီးသွားရန်စီစဉ်ပါကသင် ၀ ယ်လိုပေမည်။ မထွက်ခွာမီ "Japan Rail Pass" ။ Japan Rail Pass (အများအားဖြင့် JR Pass ဟုလည်းခေါ်ကြသည်) သည်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက် JR ကမ်းလှမ်းသောအလွန်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ရထားလမ်းဖြစ်သည်။ JR ၏ Shinkansen နှင့်ပုံမှန်အမြန်ယာဉ်များစသည်ဖြင့်သင်စီးနိုင်သည်။ Japan Rail Pass သည်လူတစ် ဦး လျှင်ယန်း ၃၃၀၀၀ (၇ ရက်၊ သာမန်ကားအမျိုးအစား) ဖြစ်သည်။ ဂျပန်တွင် Shinkansen ရှိတိုကျိုနှင့်အိုဆာကာအကြားလူတစ် ဦး အတွက်ယန်း ၂၈၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည် JR အမြောက်အများကိုအသုံးပြုပါက Japan Rail Pass သည်သင်၏အလွန်အစွမ်းထက်သော“ သူငယ်ချင်း” ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အောက်မှာ ...
အကြံပြုဆောင်းပါးများ / အဘိတ်
ထူးဆန်းတဲ့ဝါသနာအမျိုးမျိုးရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ငါဟိုတယ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်နေရာများနှိုင်းယှဉ်ရတာကြိုက်တယ်။ ငါဟိုတယ်တစ်ခုမှာဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့နေရာအတော်များများနဲ့စစ်ဆေးပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနဲ့ဘွတ်ကင်လုပ်တယ်။ ဒီဝါသနာကငါ့အတွက်တော့ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေလို့ခံစားရတယ် ...
ဂျပန်တွင်လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်များကိုဘွတ်ကင်နှင့် ၀ ယ်ယူနည်း။ Sumo, ဘေ့စ်ဘော, ဖျော်ဖြေပွဲ, လှုပ်ရှားမှုများ ...
အကယ်၍ သင်သည်အုပ်စုကြီးတစ်ခု၏လှုပ်ရှားမှုခရီးစဉ်တွင်မပါ ၀ င်ပါက၊ ဂျပန်ရှိသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်လွတ်လပ်စွာခရီးသွားလာလျှင်၊ အားကစားပြိုင်ပွဲများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲများအတွက်လက်မှတ်များကိုသင်မည်သို့ ၀ ယ်သည်။ သို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများကဲ့သို့သောခရီးစဉ်များကိုသင်မည်ကဲ့သို့လျှောက်ထားပါသနည်း။ ဘွတ်ကင်ဆိုဒ်များရှိတယ် ...
ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားသောအခါ shinkansen (Bullet train)၊ လေယာဉ်ပျံ၊ ဘတ်စ်ကား၊ တက္ကစီ၊ ကားငှားရမ်းခြင်းစသည်ဖြင့်ပေါင်းစပ်။ အလွန်ထိရောက်စွာရွေ့လျားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် Shinkansen စီးနင်းမှုခရီးစဉ်ကိုပေါင်းထည့်ပါကနှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် Japan Rail Pass ကို ၀ ယ်ခြင်းသည်အလွန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာ ...
အကြံပြုဆောင်းပါးများ / နေရာများ
အကြံပြုဆောင်းပါးများ / စိတ်ဝင်စားမှုများ
ဂျပန်သို့သွားသောခရီး၌သင်ပျော်မွေ့နိုင်သောအရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှမည်သည့်အရာများအတွက်သင်၏ခရီးသွားအစီအစဉ်ကိုတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားပါသနည်း။ ဤစာမျက်နှာတွင်ကျွန်ုပ်ဂျပန်၌သင်ပျော်မွေ့နိုင်သောအရာများကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်စိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာ၏ပုံကိုနှိပ်ပြီး ...
ဤစာမျက်နှာတွင်လှပသောပန်းပွင့်များနှင့်အတူရှုခင်းများကိုမိတ်ဆက်ပါမည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကဒီမှာနဲ့အဲဒီမှာချယ်ရီပွင့်တွေစိုက်လို့အကောင်းဆုံးနေရာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့အရမ်းခက်တယ်။ ဤစာမျက်နှာတွင်နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များမှခရီးသွားများသည်ချယ်ရီပန်းပွင့်များနှင့်အတူဂျပန်၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုခံစားနိုင်မည့်နေရာများကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ...
ဘယ်အချိန်ဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်လဲ။ အဖြေသည်ခရီးသွားခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်မူတည်သည်။ သင်သည်ဂျပန်၏ကျော်ကြားသောချယ်ရီပွင့်များကိုမြင်ချင်ပါသလား။ အဲလိုဖြစ်ရင်toပြီလမှာဂျပန်ကိုလာဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်။ လှပသောနှင်းဖုံးနေသောရှုခင်းများကိုသင်မြင်ချင်ပါသလား။ Hokkaido, Tohoku သို့မဟုတ် Nagano ဇန်နဝါရီလမှဖေဖော်ဝါရီလအထိသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်များကိုပျော်မွေ့လိုပါကနို ၀ င်ဘာပတ်ပတ်လည်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဟော့ကိုင်းဒိုး၌ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်များကိုသွားကြည့်မည်ဆိုပါကအောက်တိုဘာပတ်ပတ်လည်တွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ရာသီတစ်ခုစီ၏အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးအင်္ဂါရပ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ နွေ ဦး ရာသီ - မတ်လ၊ ,ပြီ၊ မေလ။ Fuji, Japan = ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Ibaraki, Hitachi Seaside Park at Adobe Stock Nemophila ဂျပန်နွေ ဦး ရာသီသည်မတ်လ၊ Aprilပြီနှင့်မေလများအတွင်းဖြစ်သည်။ မတ်လ၏နောက်ဆုံး ၃ ပတ်အပြင်Aprilပြီ၏ပထမ ၃ ပတ်သည်နွေ ဦး ရာသီအတွက်ခရီးသွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းသားများသည်စာသင်နှစ်ပြီးဆုံးသွားပြီးအလုပ်လုပ်သောလူကြီးများမှာမူအလုပ်များနေဆဲဖြစ်သည်။ ဂျပန်စာသင်နှစ်သည်Aprilပြီလမှစပြီးနောက်နှစ်မတ်လတွင်ပြီးဆုံးသည်။ ချယ်ရီပန်းပွင့်များသည်စာသင်နှစ်အကြားနှစ်ပတ်တာကာလအတွင်းပွင့်တတ်သည်။ သင်ဂျပန်သို့ဘယ်သွားသည်အပေါ်မူတည်ပြီးသင်တက်ရောက်ရန်ချယ်ရီပန်းပွင့်ပွဲကိုအမြဲတမ်းတွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ နွေရာသီရာသီဥတုသည်နေ့ပိုင်းတွင်အလွန်ကောင်းသော်လည်းညမှာအေးအေးဆေးဆေးဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ နွေရာသီ - ဇွန်၊ ဇူလိုင်၊ သြဂုတ်လ - ဟော့ကိုင်းဒိုနှင့်နွေရာသီပွဲတော်များကိုအကြံပြုသည်။ ရောင်စုံပန်းပွင့်ကွင်းနှင့်အပြာရောင်မိုးကောင်းကင် Shikisai-no-oka၊ ။
ဂျပန်လူမျိုးအများစုသည်အင်္ဂလိပ်စာကိုမသုံးတတ်ကြပါ။ ဤအကြောင်းကြောင့်ဂျပန်သို့ရောက်လာသူများသည်ဂျပန်လူမျိုးများနှင့်ကောင်းစွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ခြင်းမရှိပေ။ တစ်ခါတစ်ရံနိုင်ငံခြားသားများသည်ပျောက်ဆုံးသောအခါသို့မဟုတ်သတင်းအချက်အလက်လိုအပ်သောအခါမည်သူ့ကိုအကူအညီတောင်းရမည်ကိုတွေးမိကြသည်။ မြို့ငယ်တစ်ရွာသို့သွားသောအခါစားသောက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်၌ပင်လူများနှင့်အလွယ်တကူ ဆက်သွယ်၍ မရနိုင်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ဂျပန်ရှိလူများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင်ဘာလုပ်နိုင်ပါသလဲ။ အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ် "Sumimasen" ဆိုပါစို့သင်သည်သင်မသိသောဂျပန်လူမျိုးတစ် ဦး နှင့် ဦး ဆုံးစကားပြောသောအခါ၊ အောက်ပါဂျပန်စကားစုကိုအရင်သုံးသင့်သည်။ "Sumimasen" ဒီဟာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ "Excuse me" (သို့) "Sorry (bother to)" နဲ့ဆင်တူတယ်။ ဂျပန်တွင်ဤစကားစုကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ “ Sumimasen” ကို“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” သို့မဟုတ်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုတွင်အကူအညီတောင်းရန်သုံးနိုင်သည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏အာရုံစိုက်မှုကိုခံယူလိုပါကဤစကားစုသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဂျပန်မှလူများသည်အင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်းကိုမစွမ်းနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် Sumimasen ဟုဂျပန်လူမျိုးကိုပြောပါကသူတို့ပြောတာကိုရပ်ပြီးနားထောင်လိမ့်မည်။ ဂျပန်လူမျိုးများသည်နိုင်ငံခြားသားများကိုကြင်ကြင်နာနာကြိုဆိုကြသည်။ ထို့ကြောင့်သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက“ Sumimasen” ကိုသုံးပါ။ နားထောင်ခြင်းအတွက်လည်းတစ်ယောက်ယောက်ကိုကျေးဇူးတင်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ စိတ်မပူပါနဲ့ ဂျပန်လူမျိုးတွေက“ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာနားလည်တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကျေးဇူးတင်မှုကိုသူတို့နားလည်လိမ့်မယ်။ စက္ကူပေါ်တွင်အက္ခရာများကိုရေးခြင်းဂျပန်လူမျိုးများသည်ရှက်တတ်သော်လည်းသင်ဒုက္ခရောက်သောအခါသင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီလိမ့်မည်။ = Shutterstock ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိငွေကြေးသည်ယန်းဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းထားများရှိပြီးငွေလဲလှယ်ခြင်းမပြုမီဤနေရာတွင်ကြည့်ပါ။ ဤနေရာတွင်သင်သည်ဂျပန်ငွေတောင်းခံလွှာများနှင့်ဒင်္ဂါးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဂျပန်နိုင်ငံရှိအကြွေးဝယ်ကဒ်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်၍ လက်ရှိအခြေအနေကိုရှင်းပြပါမည်။ ငွေလဲလှယ်နှုန်းစာရင်း - ဂျပန်၏ယူရိုဒေါ်လာ၊ စသည်ဖြင့်သင့်တိုင်းပြည်၏ငွေကြေးမှာ ၁ ယန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ရင်းမြစ် - www.exchange-rates.org ဂျပန်ဘဏ်ငွေစက္ကူများနှင့်ဒင်္ဂါးပြားဂျပန်ရှိငွေစက္ကူများ = Adobe Stock ဂျပန်တွင်ငွေစက္ကူအမျိုးအစားလေးမျိုးရှိသည်။ သင်အများဆုံးအသုံးပြုမည့်မှတ်စုသည် ၁၀၀၀ ယန်းတန်ဖိုးဖြစ်သည်။ ယန်း ၁၀,၀၀၀ ယန်း ၅၀၀၀ ယန်း ၂၀၀၀ ယန်း ၁၀၀၀ ဂျပန်ရှိဒင်္ဂါးများ = Adobe Stock ဂျပန်တွင်ဒင်္ဂါးလေးမျိုးရှိသည်။ ယန်း ၁၀၀ နှင့် ၁၀ ယန်းအကြွေစေ့ကိုမကြာခဏအသုံးပြုရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ ယန်း ၅၀၀ ယန်း ၁၀၀ ယန်း ၅၀ ၁ ယန်း ၅ ယန်း ၁ ယန်းဂျပန်ငွေနှင့်ဆက်စပ်သောအကြံပြုဗီဒီယိုများဂျပန်ငွေပေးချေမှုငွေများသာလက်ခံသောစတိုးဆိုင်များစွာရှိသေးဂျပန်တွင်ငွေသားများသာလက်ခံသောဆိုင်များစွာရှိသည်။ ဟိုတယ်များ၊ စတိုးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များ၊ အဆင်ပြေသောစတိုးဆိုင်များအတွက်မြို့တော်သို့သင်ခရီးသွားလျှင်အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ အချို့သောအငှားယာဉ်များပင်မကြာသေးမီကအကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုလက်ခံလာကြသည်။ ရထားလက်မှတ်ဝယ်သောအရောင်းစက်များသည်အကြွေးဝယ်ကဒ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သင်သည်ဗိမာန်တော်သို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်း၌ ၀ င်ခွင့်ကြေးပေးဆောင်ပါကငွေအလွယ်တကူရရှိနိုင်သင့်သည်။ သင်၏ငွေများကိုလေဆိပ်တွင်လဲလှယ်ပါဂျပန်နိုင်ငံရှိစျေးဆိုင်အနည်းငယ်သည်ဂျပန်ယန်းမဟုတ်သောအခြားငွေများကိုလက်ခံကြသည်။ ထို့ကြောင့် ...
ဤစာမျက်နှာတွင်ဂျပန်နှင့်သက်ဆိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမိတ်ဆက်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤအချက်အလက်များကိုအခါအားလျော်စွာ update လုပ်ပါမည်။ သတင်းအချက်အလက်များကိုစုဆောင်းရန်အတွက်၎င်းသည်အသုံးဝင်သောအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟိုတယ်များ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဒေသဆိုင်ရာဆက်စပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုအမျိုးအစားအလိုက်အသေးစိတ်အနှစ်ချုပ်ဖော်ပြထားသည်။ ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေတွင်လင့်ခ်များရှိနေသောကြောင့်ထိုနေရာမှသင်ကြည့်လိုသောစာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ဂျပန်အမျိုးသားခရီးသွားလာရေးအဖွဲ့ဂျပန်အကြောင်းလေ့လာသူများကဆိုဒ်များဂျပန်အမျိုးသားခရီးသွားလာရေးအဖွဲ့ (JNTO) သည်ဂျပန်အစိုးရ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ JNTO ၏တရားဝင် ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဂျပန်အတွက်ရှုခင်းကြည့်ရှုသည့်အချက်အလက်များစွာပါရှိသည်။ ဤအချက်အလက်သည်ဘာသာစကား ၁၅ မျိုးဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဂျပန်တွင်အဓိကဘေးအန္တရာယ်များကြုံတွေ့ရပါကဤတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးလိမ့်မည်။ >> JNTO ၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ japan-guide.com japan-guide.com သည်ကျော်ကြားသောဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်တွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားများကလုပ်ကိုင်သည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖန်တီးပြီးသည့်နောက်တွင်၎င်းသည်ဆောင်းပါးများတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ယခုဂျပန်သို့လာရောက်သည့်ခရီးသွား among ည့်သည်များနှင့်အကျွမ်းတဝင်အရှိဆုံးသောခရီးသွားသတင်းအချက်အလက်နေရာဖြစ်သည်ဟုပြောနိုင်သည်။ နွေ ဦး ရာသီ၌၎င်းသည်ဂျပန်နိုင်ငံရှိချယ်ရီပန်းပွင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးသည်။ >> japan-guide.com ၏တရားဝင် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ဤနေရာတွင်ရှိသည်။ ZEKKEI Japan ZEKKEI Japan သည် tourist ည့်သည်သတင်းအချက်အလက်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်ပြီးတိုကျို၊ Ginza တွင်ရုံးချုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ ဂျပန်အလှတရားကိုနိုင်ငံခြားသားများအားမိတ်ဆက်ပေးရန်လှပသောရုပ်ပုံများကိုသုံးသည့်ဆောင်းပါးများပါ ၀ င်သည်။ ZEKKEI ဆိုသည်မှာဂျပန်တွင်အမြင့်ဆုံးလှပသောရှုခင်းကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်း၏အမည်၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကဲ့သို့ပင်ဒါဟာ ...
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ SIM ကတ်နှင့်အိတ်ဆောင်ဝိုင်ဖိုင်ငှားရမ်းခြင်း! ဘယ်မှာဝယ်ပြီးငှားမလဲ။
ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်စဉ်စမတ်ဖုန်းကိုသုံးချင်သည်။ မင်းဘယ်လိုရလဲ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ရွေးချယ်မှုခြောက်ခုရှိသည်။ ပထမ ဦး စွာသင်သည်သင်၏လက်ရှိအစီအစဉ်တွင် roaming ဝန်ဆောင်မှုကိုသုံးနိုင်သည်သို့သော်နှုန်းထားများအတွက်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုပေးသူနှင့်စစ်ဆေးပါ။ ဒုတိယ၊ သင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားနေစဉ်သင်၏လက်ရှိစမတ်ဖုန်းဖြင့်အခမဲ့ Wi-Fi ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့နောက်သင်ကပေးဆောင်ရသောဝိုင်ဖိုင်ဝန်ဆောင်မှုကိုစာရင်းသွင်းနိုင်သည်။ သင်၏သော့ဖွင့်ထားသောစမတ်ဖုန်းနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ကြိုတင်ငွေဖြည့် SIM ကဒ်ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်၏အိတ်ကပ် Wi-Fi ရောက်တာ၊ ဆင်းမ်ကဒ်သို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်နိုင်သောစမတ်ဖုန်းကိုရယူရန်သင်၏နိုင်ငံသို့မဟုတ်ဂျပန်မှငှားရမ်းခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ဟိုတယ်မှစမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုငှားရမ်းနိုင်သည်။ အောက်တွင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီရန်ဤရွေးချယ်မှုတစ်ခုစီ၏သတင်းအချက်အလက်ကိုဖော်ပြထားသည်။ သင်၏အသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကဘာလဲ။ Osaka Japan ရှိ Kansai လေဆိပ်ရှိ Sim card အရောင်းစက်သည်သင်၏ခရီးအတွက်ပစ္စည်းရွေးရန်လိုအပ်သောအချက်အလက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် Roaming ၀ န်ဆောင်မှုများမကြာသေးမီကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များတွင်ဈေးပေါပေါသုံးနိုင်သော roaming ဝန်ဆောင်မှုများသည်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ သင်၏လက်ရှိပံ့ပိုးသူမှတစ်ဆင့်စျေးနှုန်းချိုသာသော roaming ဝန်ဆောင်မှုများရှိပါက၎င်းကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ Pocket Wi-Fi Routers အကယ်၍ သင်၏မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခရီးသွားလျှင်၊ အိတ်ဆောင် Wi-Fi ရောက်တာကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံး။ Wi-Fi ရောက်တာတစ်ခုနှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်၏အုပ်စုသည်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးထက်ပိုသောအင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သင့်မှာ Wi-Fi ရောက်တာနှစ်ခု (သို့) နှစ်ခုထက်ပိုနေရင်ခွဲနေရင်အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။
ဂျပန်မှာအချိန်ဇုန်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ တိုကျို၊ အိုဆာကာ၊ ကျိုတို၊ ဟော့ကိုင်းဒို၊ စန်ဒါ၊ နာဂန်နာ၊ ဟီရိုရှီးမား၊ ဖူကုအို၊ ထို့အပြင်နေ့အချိန်၌ဂျပန်နိုင်ငံတွင်နေ့အလင်းရောင်မရှိသောကြောင့်ဂျပန်၏အချိန်ကိုသိရန်မလွယ်ကူပါ။ Japan သည်အောက်ကအချိန်ဖြစ်သည် (အချိန်ကိုမပြပါက၊ cursor ကိုမြေပုံ၏ဂျပန်အပိုင်းတွင်ထားပါ) ။ ကျေးဇူးပြု၍ အထက်ပါအချိန်ကိုလေ့လာပြီးသင်နေထိုင်သောwithရိယာနှင့်အချိန်ကွာခြားမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ အကယ်၍ နိုင်ငံသည်အရှေ့နှင့်အနောက်တို့တွင်ရှည်လျားပါက၊ တူညီသောတိုင်းပြည်တွင်အချိန်ဇုန်များစွာရှိပါက၊ အချိန်ကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ သို့သော်ဂျပန်သည်အရှေ့နှင့်အနောက်၌မရှည်ပါ။ ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်ရှည်လျားကျယ်ပြန့်စွာကျယ်ပြန့်သည်။ အရှေ့နှင့်အနောက်ပိုင်းတို့တွင်မူအချိန်ဇုန်ကို ၂ ခုထက်ပိုပြီးတိုးရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာမျက်နှာရှိယုန်သည်ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု၊ Takehara City ရှိ Ookuno ကျွန်းတွင်နေထိုင်သည်။ ဤကျွန်းပေါ်တွင်လူ ၂၀ ခန့်သာရှိသည်၊ သို့သော်ထိုတွင်ယုန် ၇၀၀ ရှိသည်။ “ Alice's Adventures in Wonderland” ဝတ္ထုတွင်အိတ်ဆောင်နာရီကိုကြည့်နေစဉ်ယုန်တစ်ကောင်လျင်မြန်စွာပြေးသွားသည်။ သင် Oono ကျွန်းကိုသွားလျှင်၊ သင်သည်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောယုန်နှင့်တွေ့နိုင်လိမ့်မည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ဖတ်နေတန်ဖိုးထားတယ်။ Back to“ Fundamentals” ကျွန်ုပ်အကြောင်း Bon KUROSAWA ကျွန်ုပ်သည် Nihon Keizai Shimbun (NIKKEI) ၏အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတွင်လွတ်လပ်သော ၀ က်ဘ်စာရေးဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်သည်။ နီကေးမှာ ...
ဂျပန်အတွက်အားလပ်ရက်! နွေ ဦး ရာသီ၏ရွှေရောင်ရက်သတ္တပတ်တွင်ခရီးသွား attractions ည့်ဆွဲဆောင်မှုများပြည့်နှက်နေသည်
ပြက္ခဒိန်အားလပ်ရက် ၁၆ ခုရှိသည်။ အကယ်၍ အားလပ်ရက်သည်တနင်္ဂနွေနေ့၌ကျရောက်လျှင်၊ ထိုရက်နောက်ပိုင်းအနီးဆုံးရက်သတ္တပတ် (များသောအားဖြင့်တနင်္လာနေ့) သည်အားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ ဂျပန်အားလပ်ရက်များသည်theပြီလမှမေလအထိအပတ်စဉ်တွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ဤရက်သတ္တပတ်ကို“ ရွှေရောင်ရက်သတ္တပတ်” ဟုခေါ်သည်။ ထို့အပြင်စက်တင်ဘာလလယ်မှစက်တင်ဘာလနှောင်းပိုင်းအထိရက်သတ္တပတ်များစွာနားရက်များရှိသည်။ ယခုအပတ်ကို“ Silver Week” ဟုခေါ်သည်။ ကျောင်းပိတ်ရက်သည်ဇူလိုင်လကုန်မှသြဂုတ်လကုန်အထိဖြစ်သည်။ ဤကာလအတွင်းနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိခရီးသွား dest ည့်သည်များပြည့်နှက်လာမည်ကိုသတိပြုပါ။ နှစ်သစ်ကူးနေ့ - တိုကျို၊ မေဂျီဂျင်ဂူဘုရားကျောင်း၊ တိုဂျီတို၊ တိုဂျီတံခါးတိုရီတိုဂိတ် = Shutterstock နှစ်သစ်ကူးသည်ဂျပန်လူမျိုးများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ လူအများစုသည်ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်မှစ၍ ခွင့်ယူပြီးနှစ်သစ်ကူးနေ့တွင်မိသားစုနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မည်။ လူများသည်နှစ်သစ်ကူးအတွက်ဆုတောင်းရန်နတ်ကွန်းများသို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းများသို့သွားရောက်ကြသည်။ လာမယ့်နှစ် - ဇန်နဝါရီလ၏ဒုတိယတနင်္လာနေ့တနင်္လာနေ့ဂျပန်လူငယ်များသည်ကာဂျိုရှီးမားမြို့မှလာလာသောခေတ်နေ့အခမ်းအနားများအတွင်းကီမိုနိုတွင်နေထိုင်ကြသည့်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုအတွက်ကီမိုနို ၀ တ်စုံများ ၀ တ်ကြသည်။ ဒီနေ့မှာဂျပန်လူမျိုးတွေဟာအသက် ၂၀ ရှိသူတွေကိုဂုဏ်ပြုကြပါတယ်။ များစွာသောမြူနီစီပယ်အခမ်းအနားများသူတို့ရဲ့ဂုဏ်အသရေအတွက်။ လူငယ်များသည် Kimono သို့မဟုတ် Suits များကို ၀ တ်ဆင်ပြီးလာလတ္တံ့သောနေ့ကိုကျင်းပကြသည်။ အမျိုးသားဖောင်ဒေးရှင်းနေ့ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက်သည်ဂျပန်၏အုတ်မြစ်ကိုဂုဏ်ပြုရန်နေ့ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းဒဏ္endာရီအရပထမemကရာဇ်မင်းဂျင်မူသည် ...
ဂျပန်၌နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အပျက်များ! နှစ်သစ်ကူး, Hanami, Obon, ခရစ်စမတ်နှင့်ပိုပြီး!
ဂျပန်တွင်ရိုးရာနှစ်ပတ်လည်ပွဲများစွာရှိသေးသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများစွာသည်ဤနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားများကို၎င်းတို့၏မိသားစုများနှင့်အတူကျင်းပရန်ရွေးချယ်ကြသည်။ မကြာသေးမီကနိုင်ငံခြားခရီးသွား many ည့်သည်များစွာသည်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်များကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်များမှတစ်ဆင့်သင်သည်ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ကိုရရှိနိုင်သည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤနှစ်ပတ်လည်ဖြစ်ရပ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြသည်။ နှစ်သစ်ကူးအခမ်းအနားများနှစ်သစ်ကူးအတွက်နှစ်ပတ်လည်အဖြစ်အပျက်များသည်ဂျပန်၌အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းမှအောက်ပါအဖြစ်အပျက်များကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပသည်။ Joya no kane "Joya no kane" သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်းများတွင်ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည် = Shutterstock "Joya no kane" သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းများ၌ကျင်းပသောပွဲဖြစ်သည်။ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်နေ့ညသန်းခေါင်ယံတွင်ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည်ဗိမာန်တော်၏ခေါင်းလောင်းကြီးများကိုအဆ ၁၀၈ ကြိမ်တိုင်တီးကြသည်။ လူသားများကိုစိုးရိမ်စိတ် ၁၀၈ ရှိပုံရသည်။ ခေါင်းလောင်းသံမြည်နေသောနောက်ကွယ်မှဆိုလိုရင်းမှာထိုခံစားချက်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ဖြစ်သည်။ Toshi-Koshi soba "Toshi-Koshi soba" သည်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင်ထုံးစံအတိုင်းစားသောခေါက်ဆွဲများဖြစ်သည်။ ဂျပန်လူမျိုးများသည်ကံကောင်းထောက်မစွာနေထိုင်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ရှည်လျားသောခေါက်ဆွဲကိုစားကြသည်။ Hatsumode ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုရှိ Asakusa ရှိ Hatsumode အုပ်စု။ Hatsumode သည်ဂျပန်နှစ်သစ်ကူး၏ပထမဆုံး Shinto နတ်ဘုရားသို့မဟုတ်ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားကျောင်းလည်ပတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ Shutterstock "Hatsumode" သည်နှစ်တွင်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့မဟုတ်ဘုရားကျောင်းသို့ပထမဆုံးသွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ နှစ်သစ်ကူးတွင်နတ်ကွန်းများနှင့်ဗိမာန်တော်တိုင်းသည်လူအများလာရောက်လည်ပတ်ကြသည်။ Setsubun "Setsubun" သည်ဂျပန်ရိုးရာပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ Shutterstock "Setsubun" သည်မကောင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်ရိုးရာအစဉ်အလာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာဖေဖော်ဝါရီလအစောပိုင်းတွင်ကျင်းပလိမ့်မည် လူတို့သည် Outi ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသည့် Oni-wa-soto, fuku-wa-uti ဆိုသောအချိန်၌ပဲအိမ်များကိုပဲပစ်လိုက်သည်။
ရာသီဥတုနှင့်နှစ်စဉ်ရာသီဥတုဂျပန် တိုကျို၊ အိုဆာကာ၊ ကျိုတို၊
သင်ဂျပန်သို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်စီစဉ်သောအခါရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတုမည်သို့ရှိလိမ့်မည်နည်း။ ဤဆောင်းပါး၌ဂျပန်၏ရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတုနှင့်eachရိယာတစ်ခုစီ၏အင်္ဂါရပ်များကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမည်။ ဂျပန်၏ရာသီဥတုမှာအမျိုးမျိုးကွဲပြားသည်။ ဂျပန်သည်မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ ၃၀၀၀ ကျယ်ပြန့်သောရှည်လျားသောကျွန်းစုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်းကြီး ၄ ခုနှင့်ကျွန်းငယ် ၆၈၀၀ ခန့်ပါဝင်သည်။ ရာသီဥတုသည်မြောက်ဘက်စွန်းဟော့ကိုင်းဒိုးနှင့်အိုကီနာဝါတောင်ဘက်အကြားအလွန်ကွာခြားသည်။ ဟော့ကိုင်းဒိုတွင်ဆောင်းရာသီအလွန်အေး။ အိုကီနာဝါမှာဆောင်းတွင်း၌ပင်ပျော့ပျောင်းသည်။ ဆောင်းရာသီတွင်နှင်းများကျသည့်ဒေသများသည်ဟော့ကိုင်းဒိုး၏ဂျပန်ပင်လယ်ဘက်နှင့်ဟွန်ရှူးမြောက်ပိုင်းရှိဂျပန်ပင်လယ်ခြမ်းဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များ - ဂျပန်မိုးလေ ၀ သအေဂျင်စီဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီဂျပန်မိုးလေ ၀ သ - ဆောင်းရာသီ - ဂျပန်ပင်လယ်ကမ်းခြေတွင်နှင်းများဂျပန်တွင်နှင်းများကျမှု = Shutterstock ကျွန်းစု၏ကျောရိုးကဲ့သို့ပင်တောင်တန်းများသည်ကြာမြင့်စွာလည်ပတ်လျက်ရှိသည်။ ဤတောင်တန်းသည်ဂျပန်ကျွန်းစု၏ပစိဖိတ်ဒေသနှင့်ဂျပန်ပင်လယ်ဘက်မှရာသီဥတုမှာအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်။ ဆောင်းရာသီတိုင်းပြည်၏ဂျပန်ပင်လယ်ဘက်ခြမ်းတွင်ဂျပန်ပင်လယ်မှစိုစွတ်သောတိမ်များတောင်များနှင့်တိုက်မိသည်။ ဒီနေရာမှာဆီးနှင်းတွေမကြာခဏကျတတ်တယ်။ ဤအတောအတွင်းပစိဖိတ်ဘက်၌, ဆောင်းရာသီတွင်ရှင်းလင်းသောရာသီဥတုဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ဆောင်းရာသီကာလအတွင်းတောင်တန်းဒေသ၏အနောက်ဘက်ဒေသများအထူးသဖြင့်ဟော့ကိုင်းဒိုးနှင့်ဟွန်ရှူးမြောက်ပိုင်းကိုသင်သွားလျှင်နှင်းဖုံးရှုခင်းများကိုသင်မြင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ ဂျပန်မိုးတွင်းရာသီ - ဇွန်လခန့်တွင်ရိုးရာဂျပန်ကီမိုနိုရှိအမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်လှပသောအပြာရောင် hydrangea (macrophylla) ဖြင့်အလှဆင်သည့်ချဉ်းကပ်လမ်းတစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်နေသည်။
ဂျပန်တွင်ငလျင်များသည်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်မှမခံစားမိသည့်သေးငယ်သောတုန်ခါမှုများမှကြီးမားသောဆိုးဝါးသောဘေးအန္တရာယ်များအထိဖြစ်သည်။ ဂျပန်လူမျိုးအတော်များများသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်၌မည်သည့်အချိန်၌ဖြစ်ပေါ်မည်ကိုမသိသောပြknowingနာများရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကြီးမားတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုကိုအမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေသည်အလွန်နည်းပါးသည်။ ဂျပန်လူမျိုးအများစုသည်အသက် ၈၀ ကျော်အထိနေထိုင်နိုင်ကြသည်။ သို့သော်ဤအကြပ်အတည်းသည်ဂျပန်စိတ်ဓာတ်အပေါ်အဓိကလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။ လူသားများသည်သဘာဝကိုအနိုင်ယူ။ မရပါ။ ဂျပန်လူမျိုးများစွာသည်သဘာဝနှင့်အညီနေထိုင်ရန်အရေးကြီးသည်ဟုယူဆကြသည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်မကြာသေးမီကဖြစ်ပွားခဲ့သောငလျင်များနှင့်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများကိုကျွန်ုပ်ဆွေးနွေးပါမည်။ ဂျပန်ရှိငလျင်များသင်ဂျပန်၌နှစ်အနည်းငယ်နေခဲ့လျှင်အနည်းဆုံးငလျင်ငယ်လေးကိုသင်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်လိမ့်မည်။ ဂျပန်အဆောက်အ ဦး များသည်ငလျင်ကြီးတစ်ခုလှုပ်လျှင်ပင်မပြိုကွဲစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ထို့ကြောင့်ကြောက်စရာမလိုပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်သည်ဂျပန်၌ဆယ်စုနှစ်များစွာနေခဲ့ပါကငလျင်ကြီးတစ်ခုကြုံတွေ့ရနိုင်သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ Great East Japan Great Earthquake ဖြစ်ပွားသောအခါငါသည်တိုကျိုရှိမိုးမျှော်တိုက်တွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအဆောက်အ ဦး ကိုအလွန်အမင်းလှုပ်ခါခဲ့သည်။ မတ်လ ၁၁ ရက်၊ ၂၀၁၁ အရှေ့ဂျပန်၏ကြီးမားသောငလျင်ဘေးအန္တရာယ် ၂၀၁၁ မတ်လ ၁၁ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ်မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဟွန်ရှူးမြောက်ပိုင်းတွင်ပြင်းထန်သောမြေငလျင်ကြီးဖြစ်သည်။ ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပွားခဲ့သောဆူနာမီကြောင့်သေဆုံးခဲ့သည်။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော Great Hanshin ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက်ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်သည့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကိုတက်ကြွစွာသယ်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဂျပန်၌ပင်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှုကြောင့်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းနှင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုတို့ကြောင့်ပျက်စီးမှုများတိုးများလာနေသည်။ ထို့အပြင်ဂျပန်၌ငလျင်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ခရီးသွားနေစဉ်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသို့မဟုတ်ငလျင်လှုပ်လျှင်သင်ဘာလုပ်သင့်သနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ထိုကဲ့သို့သောအမှုအကြုံတွေ့ရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့ရာတွင်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်တန်ပြန်အစီအမံများကိုသိရှိခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာဂျပန်မှာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်တဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာဆွေးနွေးမယ်။ အကယ်၍ သင်သည်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသို့မဟုတ်ငလျင်ကြီးကြီးတစ်ခုကြောင့်ယခုအခါသင့်ကိုနှိပ်စက်ပါကဂျပန်အစိုးရအက်ပလီကေးရှင်း“ Safety tips” ကို download လုပ်ပါ။ ဤနည်းဖြင့်သင်သည်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရရှိသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်အမိုးအကာယူရန်လုံခြုံသောနေရာရှိသည်သေချာစေပါ။ သင့်ပတ်လည်ရှိဂျပန်လူမျိုးများနှင့်စကားပြောပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့်ဂျပန်လူမျိုးများသည်အင်္ဂလိပ်စကားပြောခြင်းကိုမစွမ်းနိုင်သော်လည်းသင်ဒုက္ခရောက်နေပါကသူတို့သည်ကူညီလိုဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကဂျီစာလုံးကိုသုံးနိုင်သည်ဆိုလျှင်တရုတ်စာလုံးများကိုသင်ဤနည်းဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ ရာသီဥတုနှင့်ငလျင်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုရယူပါနွေရာသီတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းသည်အိုကီနာဝါလေဆိပ်သို့ ၀ င်ရောက်သည် = shutterstock ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကိုဂရုပြုပါ။ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားများက "ဂျပန်လူမျိုးတွေဟာရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်ကိုနှစ်သက်တယ်" လို့ပြောခဲ့တယ် နေ့တိုင်းလိုလိုမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့သေချာစစ်ဆေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျပန်ရာသီဥတုကအချိန်တိုင်းပြောင်းလဲနေလို့ပဲ။ ဂျပန်သည်နွေရာသီမှဆောင်း ဦး ရာသီအထိမကြာခဏရာသီအလိုက်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းများရှိသည်။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာမှု၏အကျိုးဆက်များကြောင့်မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများတိုးများလာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ငလျင်နှင့်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုများသည်ဂျပန်နိုင်ငံတွင်မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။ ခင်ဗျားဂျပန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် ...
သင်သည်ဂျပန်နိုင်ငံသို့သွားသောအခါသင်သည်ဂျပန်သမိုင်း၏အခြေခံဗဟုသုတရှိပါကပိုမိုနက်ရှိုင်းသောခံစားမှုကိုခံစားနိုင်သည်။ ဤစာမျက်နှာတွင်ဂျပန်သမိုင်းတွင်အရေးကြီးသောperကရာဇ်၏အကျဉ်းချုပ်ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်သည် Japans အမျိုးသားအလံနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြသွားပါမည်။ ဂျပန်perကရာဇ်တိုကျိုမြို့ရှိ Imperial နန်းတော်မြင်ကွင်း။ Japan = Shutterstock ဂျပန်သည်ancientကရာဇ်စနစ်ကိုရှေးခေတ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့သည်။ inကရာဇ်မင်းကို Tenno ဟုခေါ်သည်။ ဒဏ္legာရီအရပထမemကရာဇ်မင်းမှာဂျင်မူဖြစ်သည်။ ဂျင်မူသည်ဘီစီ ၆၆၀ ခန့်တွင်သရဖူဆောင်းခဲ့သော်လည်းမသေချာပေ။ ထီးနန်းဆက်ခံခြင်းကိုကာလကြာရှည်စွာအမွေခံခြင်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၈၈၉ ခုနှစ်တွင်ပြConstitution္ဌာန်းခဲ့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟောင်းတွင်perကရာဇ်သည်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ၁၉၄၆ ခုနှစ်တွင်ပြConstitution္ဌာန်းခဲ့သောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသစ်တွင်နိုင်ငံသားများအားအုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာပေးခဲ့ပြီးsymbolကရာဇ်သည်“ သင်္ကေတ” ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ယနေ့တော်ဝင်မိသားစုသည်theကရာဇ်ကိုဗဟိုပြုခြင်းသည်ပုံဆောင်လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းတွင်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံတကာပွဲများတက်ရောက်ခြင်းပါဝင်သည်။ Royal Family သည် Ippan Sanga ကိုတစ်နှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီးတိုကျိုမြို့ရှိ Imperial နန်းတော်တွင်လူထုကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။ ၎င်းသည်ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်နှင့်ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက်တို့တွင်ဖြစ်ပွားသည်။ ထိုအချိန်တွင်လူများစွာသည်မိသားစုကိုလူကိုယ်တိုင်မြင်ရန်အတွက် Imperial နန်းတော်သို့လာရောက်ကြသည်။ ဂျပန်Emကရာဇ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြံပြုဗီဒီယိုများဂျပန်အလံဂျပန်အလံဂျပန်အလံကို Hinomaru ဟုခေါ်သည် " ကြီးမားသောအနီရောင်စက်ဝိုင်းကိုအဖြူရောင်နောက်ခံပေါ်တွင်ရေးဆွဲထားသည်။ အနီရောင်စက်ဝိုင်းသည်နေထွက်လာခြင်းကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဂျပန်လူမျိုးများသည်နေကိုကိုးကွယ်ကြသည်။
ဓါတ်ပုံများ - ဂျပန်တွင်မိုးရွာသည့်နေ့များ - မိုးသည်းထန်စွာရာသီများမှာဇွန်လ၊ စက်တင်ဘာနှင့်မတ်လများဖြစ်သည်
ဓာတ်ပုံများ - တိုကျို၊ အဆင်ကာရှိ Sensoji ဘုရားကျောင်း
ဓါတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Rurikoin ဘုရားကျောင်း၏မှော်
ဂျပန်အောက်တိုဘာလ! ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်တောင်areaရိယာမှစတင်!
ဓာတ်ပုံများ - ဂျပန် ၀ ါးယဉ်ကျေးမှု -Arashiyama ၀ ါးတော
ဓာတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Daitokuji ဘုရားကျောင်း - သဘာဝနှင့်သဟဇာတဖြစ်သောဇင်ကမ္ဘာ
ဓါတ်ပုံများ - ကျိုတိုရှိ Kodaiji ဘုရားကျောင်း
ဓာတ်ပုံများ - ဖူကူရှီးမားစီရင်စုရှိ Hanamiyama ပန်းခြံ
အားလုံးခရီးကိုစီစဉ်ပါ ဘယ်အချိန်မှာသွားရမလဲ (16) အဖြစ်အပျက်ပြက္ခဒိန် (15) ရာသီဥတုနှင့်ရာသီဥတု (65) အကောင်းဆုံးခရီးစဉ် (၃၀) တည်းခိုခန်း (3) လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်များ (2) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (11) အဝတ်အထည်များ (6) ဘာသာစကား (1) ငွေကြေး (1) အချိန်ကွာခြားချက် (1) အင်တာနက် (1) ကယ်ဆယ်ရေး (3) သင်ယူသည် (83) ဘဝနှင့်ယဉ်ကျေးမှု (71) သမိုင်းကြောင်း (4) ဆက်စပ်ဆိုဒ်များ (7)
အားလုံးဒေသများ Hokkaido (62) ဟွန်ရှူး: တိုကူ (၄၇) Aomori စီရင်စု (၉) Akita စီရင်စု (၁၁) အိုင်ဝါစီရင်စု (၅) Miyagi စီရင်စု (5) ယာမာဂါတာစီရင်စု (၅) ဖူကူရှီးမားစီရင်စု (၈) ဟွန်ရှူး: ကန်တို (၈၁) တိုကျို (31) တိုကျိုမက်ထရိုပိုလစ်တန် (၅) ကန်နာဂါစီရင်စု (၈) ခိဘစီရင်စု (၄) ဆာတီမာစီရင်စု (၃) အီဘရာကီစီရင်စု (၈) ဂွန်မားစီရင်စု (၆) တိုချီဂျီစီရင်စု (၇) ဟွန်ရှူး: ချူဘူ (၆၆) Shizuoka စီရင်စု (၆) ရမနာရှီစီရင်စု (၁၁) Nagano စီရင်စု (၁၅) နီဂါတာစီရင်စု (၄) Toyama စီရင်စု (၇) Ishikawa စီရင်စု (၇) ဖူကူခရိုင် (၄) Gifu စီရင်စု (၁၃) Aichi စီရင်စု (၃) မီစီရင်စု (၅) ဟွန်ရှူး: ကန်ဆိုင်း (၇၈) ရှီဂါစီရင်စု (၆) ကျိုတို (33) ကျိုတိုစီရင်စု (2) နာရာစီရင်စု (၆) ဝါကယာမစီရင်စု (၄) အိုဆာကာ (7) အိုဆာကာစီရင်စု (၄) Hyogo စီရင်စု (၈) ဟွန်ရှူး: ချူကိုကူ (33) အိုကေယာမစီရင်စု (၆) ဟီရိုရှီးမားစီရင်စု (၁၁) ယာမာဂူချီစီရင်စု (၂) တိုတိုရီစီရင်စု (၄) ရှိမန်းစီရင်စု (၈) Shikoku (17) တိုကိုရှီမာစီရင်စု (၅) ကဂါဝါစီရင်စု (၄) Ehime စီရင်စု (3) ကိုချီခရိုင် (၁) ကျူရှူး (37) ဖူကူကိုစီရင်စု (၅) စစ်ကိုင်းစီရင်စု (၁) Nagasaki စီရင်စု (7) Kumamoto စီရင်စု (၈) အိုိုင်တာစီရင်စု (၈) မီယာဇာကီစီရင်စု (၃) ကာဂိုရှီမာစီရင်စု (၃) အိုကီနာဝါစီရင်စု (၁၃)
စိတ်ဝင်စားမှုအားလုံး လက်မှတ်နှင့်ခရီးစဉ်များ (2) ဖက်ရှင် (8) စျေး ၀ ယ်ခြင်း (14) ဂျပန်အစားအစာများ (15) နှင်းပွိုင့်များ (77) ချယ်ရီပွင့်များ (34) ပန်းများ (32) ဂျပန်ဥယျာဉ်များ (16) ဆောင်း ဦး ရာသီအရွက်များ (54) Onsen (22) တိရစ္ဆာန်နှင့်ငါးများ (10) တောင်တက် (67) သာယာလှပစီးနင်းခြင်း (29) အပန်းဖြေပန်းခြံများ (6) ညအမြင်များနှင့်အလင်းရောင်များ (39) ပွဲတော်များ (23) ဘုရားကျောင်းနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ (51) ရဲတိုက်များ (33) သမိုင်းဝင်နေရာများ (၅၉) ဆာမူရိုင်းနှင့်နိင်ဂျာ (14) ရိုးရာလက်မှုပညာ (5) ပြတိုက် (8) မန်ဂါနှင့် Anime (7) ကမ်းခြေများ (11) အားကစား (14) စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး (8) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (12)
အားလုံးရာသီ ဆောင်းရာသီ (52) ဒီဇင်ဘာလ (၁၈) ဇန်နဝါရီလ (၁၅) ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၈) နွေ ဦး (၄၇) မတ်လ (၁၂) ပြီလ (၁၇) မေလ (၁၃) နွေရာသီ (37) ဇွန် (၁၂) ဇူလိုင်လ (၁၆) သြဂုတ်လ (၁၅) ဆောင်း ဦး (၄၇) စက်တင်ဘာ (၁၆) အောက်တိုဘာ (16) နိုဝင်ဘာ (၁၇)
အားလုံး Tags: အဘရှီရ (1) နီကိုက (1) အိဇ်ဘုန်းတော်ကြီး (၁) Shiretoko (14) Daisetsuzan (5) Asahiyama တိရစ္ဆာန်ရုံ (1) Furano (17) Biei (19) Sapporo (22) အိုတာရူ (14) နီစီကို (7) Hakodate (16) Aomori (3) Oirase စီး (3) ချူဆန်ဂျီဘုရားကျောင်း (၃) ကကူနိုဒတ် (5) တင်ဒါ (3) Ginzan Onsen (4) ဇို (5) Aizu-Wakamatsu (2) Nikko Tosho-gu (4) Hitachi ပင်လယ်ကမ်းခြေပန်းခြံ (4) Ashikaga ပန်းခြံ (3) အိုး (4) တိုကျိုဒစ္စနေး (1) တိုကျိုမိုးမျှော်တိုက် (3) အီဒိုတိုကျိုပြတိုက် (၂) Asakusa (3) Sensoji ဘုရားကျောင်း (3) Ueno (1) တိုကျိုအမျိုးသားပြတိုက် (၂) Akihabara (4) Palaceကရာဇ်နန်းတော် (2) Ginza (3) Odaiba (2) တိုကျိုတာဝါ (3) Shibuya (2) မေဂျီဂျင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်း (၄) ရှင်ဂျုကု (4) Shinjuku Gyoen ဥယျာဉ် (၂) တောင် တakao (3) Yokohama (2) Kamakura (6) ဟာဆီစာဘုရားကျောင်း (1) osh နော့ရှီမာ (3) Hakone (4) Hakone လေပြင်ပြတိုက် (၁) တောင် ဖူဂျီ (13) ဖူဂျီ -Q Highland (2) ကန်ဘောဂူချီကို (၂) Jigokudani နှင်းမျောက်ဥယျာဉ် (3) Matsumoto ရဲတိုက် (4) Hakuba (6) Kamikochi (5) တတီယာမာကူဘို Alpine လမ်းကြောင်း (၆) Takayama (4) Shirakawago (9) ကာနဇာဝါ (5) Kenrokuen ဥယျာဉ် (6) Nabana no Sato (3) အိဇ် Grand Shrine (2) Gion (1) ကင်ကာကူဂျီဘုရားကျောင်း (4) Kiyomizudera ဘုရားကျောင်း (7) Fushimi Inari-taisha ဘုန်းကြီးကျောင်း (4) Eikando Zenrinji ဘုရားကျောင်း (4) Arashiyama (4) Todaiji ဘုရားကျောင်း (4) နရာပန်းခြံ (4) တောင် Yoshino (4) Koyasan (4) Kumano ကိုဒို (4) ဥမီဒါ (1) အိုဆာကာရဲတိုက် (3) Dotonbori (1) USJ (3) Kaiyukan (1) ကိုဘေး (3) ဟီဂျီရဲတိုက် (4) ဟီရိုရှီးမားငြိမ်းချမ်းရေးသတိရအောက်မေ့ပွဲပြတိုက် (၄) Miyajima (10) Izumo Taisha (5) ဖူကူကို (3) Huis Ten Bosch (၁) Nagasaki (3) Kumamoto ရဲတိုက် (2) Aso (5) ဘепပူ (6) Yufuin (3) Takachiho Gorge (3) Sakurajima ကျွန်း (2) Yakushima (2) အိုကီနာဝါ (9)
မူပိုင်ခွင့်© Best of Japan , 2021, All Rights Reserved ။